Driver ပျောက်သားလို.ပါ — MYSTERY ZILLION
ကျွန်တော်.စက်မှာ ShowBiz Software ကိုသွင်းပီး သုံးရတာအဆင်မပြေလို. Control Panel/Setting/Remove Program ကနေ ဖျက်လိုက်တာ။ ခု CD Drive ကလုံး၀မတက်တော.ဘူး ။ ပါ၀ါတက်ပီးခွေထဲ.လို.ရပေမဲ. My Computer မှာ Drive ကိုပြထားခြင်းလုံး၀မရှိပါဘူး ။ အဲဒါ Drive ပြန်ပေါ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကို အကြံပေးစေလိုပါတယ်။ Drive ကိုဖြုတ်ပီး တခြားစက်မှာသွားစမ်းတော.လဲ ရနေပါတယ်။ ကျွန်တော.စက်တခုထဲ အဲလိုဖြစ်နေလို.ပါ။ ကူညီကြပါနော်။
တစ်ခြား Power ကြိုးပြောင်းသုံးကြည့်ပါ။ အပိုပါတဲ့လွတ်နေတဲ့ power ကြိုးကိုပြောတာနော်။ drive တပ်ပြီတော့ BIOS ထဲကိုလည်းဝင်ကြည့်လိုက်ပါဦး။ drive ကိုသိနေရင်တော့ drive driver ကို ပြန်တင်ကြည့်ပါ။ device manger ထဲက scan for hard ware ကိုလုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့ အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အဆင်ပြေပါစေ
ကျွန်တော်လဲ ဖြစ်ဖူးပါတယ်. ဒီအတိုင်းဖြေရှင်ကြည့်တာရတယ်ဗျ. ထင်တောင်မထင်ဘူး. blog website တစ်ခုမှာတွေ့လို့လုပ်ကြည့်လိုက်တာပါ. ဘယ် blog လဲဆိုတာတော့ မသိတော့ဘူး.